USara Gutierrez. Udliwanondlebe nombhali wehlobo lokugqibela leUSSR | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Udliwano-ndlebe, Ababhali, Iincwadi, Inoveli
Iifoto zokugquma: ngoncedo lukaSara Gutiérrez.
USara gutierrez Ungugqirha wamehlo, kodwa ubhala kwakhona kwizincoko ukuya kwiingxelo. Ukwaqhuba iarhente yeIngenio de Comunicación, kunye noEva Orue. Ngoku uzise inoveli, eyokuqala, enesihloko Ihlobo lokugqibela le-USSR. Kule udliwano ndlebe Usixelela ngayo kwaye usixelela nokunye okuninzi. Ndiyabulela kakhulu ngexesha kunye nobubele ondinike bona.
UNCWADI NGOKU: Inoveli yakho yamva ngu Ihlobo lokugqibela le-USSR. Usixelela ntoni kuyo?
U-SARA GUTIÉRREZ: Eyokugqibela neyokuqala, kude kube ngoku konke endikubhalileyo yayisincoko okanye ingxelo enkulu.
Ihlobo lokugqibela le-USSR Yiyo ibali elisekwe kuhambo endilwenzileyo ndadlula kumazwe eSoviet, ukusuka kuLwandle lweBaltic ukuya kuLwandle oluMnyama, kwiveki yokuqala kaJulayi 1991, kwiinyanga ezimbalwa emva kokupheliswa kweSoviet Union.
Into endiyiqale njengohambo olunye lwabakhenkethi yaphela yangulowo amava angaqhelekanga kufanelekile ukuba kwabelwane ngako, ikakhulu ngenxa yezi zinto zimbini: eyokuqala, umntu endihamba naye, umntu osebenza naye wase-Uzbek owayengazange ahambe ngolonwabo lokwenza oko okanye abone ulwandle okanye angcamle inkululeko, kwaye ngubani endandingafuni ukuba ahambe nam; kwaye eyesibini, oololiwe basebusuku, abo sanyanzelwa yimeko yam yokufunda eUSSR (eyayindithintela ukuba ndingahambi ngaphandle kwemvume ezikhethekileyo okanye ukuhlala ehotele) nalapho sihlangana nabantu bazo zonke iintlobo abakulungeleyo ukuthetha ngoThixo nangabantu.
Ngombono wexesha, i ukuhamba emini yi izixeko esizityelelayoILeningrad, ITallinn, ERiga, eVilnius, eLvov, Kiev y Odessa, ukuqala kwi IKharkiv): Iithintelo kwi Riga, umsebenzi onzulu wenkolo eLvov, umboniso wenkululeko apho sasibandakanyeke eKiev, umzekelo, yayiyikhathalogu yemiqondiso malunga nokudlula komzuzu.
Ekubaliseni kohambo, kunyanzelekile ushicilelo lobomi bemihla ngemihla Iminyaka emibini edlulileyo ye-USSR (ndafika kweli lizwe ngo-Novemba ngo-1989 ukuza kugxila kwi-ophthalmology) kunye neminyaka emi-5 yokuqala yobomi obuzimeleyo kwiiriphabliki (bendihlala eRashiya kude kube nguJulayi 1996).
Incwadi igqityiwe nge Imifanekiso emihle kakhulu nguPedro Arjona, kunye nezinye iifoto kunye namaxwebhu ohambo lwasebukhosini, kuhlelo olumnandi lukaReino de Cordelia.
SG: Ndicinga ukuba incwadi yokuqala endiyifundileyo Ukuzonwabisa kwintlambo kaEnid Blyton kwaye, kamva, zonke izinto ezazinokubakho kwelo qela.
Ukuba ndizobe kwimemori, into endiyikhumbulayo njenge imibhalo yokuqala ezinye Imibongo yothando ebusheni.
SG: Eyokuqala yokuqala ... akukho luvo. Ndikhumbula ndikhangele phambili kuyo xa ibetha iivenkile ezithengisa iincwadi Uthando ngamaxesha ekholera ngenxa yesandi esikhulu emlonyeni wam owawundishiyile Iminyaka eyikhulu yedwa mhlawumbi ngenxa yendlela eyinyani ngayo imeko kaGarcía Márquez kum. Kwaye, phakathi, ndiyakhumbula ndizinikele ngamandla kwi Rayuela nguCortázar.
AL: Umbhali oyintandokazi? Banokuba ngaphezulu kwesinye nangamaxesha onke.
SG: Ndingumlandeli omkhulu ka udidi, Kwaye ndizama ukungaphoswa nayiphina into UJoe sacco.
SG: Ndingathanda ukudibana USherlock Holmes, kunye nokujingxela naye eofisini yogqirha wam wamehlo uGqirha Conan Doyle. Ndicinga ukuba ibinokukhuthaza ngakumbi ukuba ndiyile Frankenstein.
SG: Ndiza kuthi akukho, kodwa ngoku ndicinga ngako Ndihlala ndifunda okanye ndibhala ndilele, okanye ubuncinci imilenze yakho yolulwe phezulu, ikhululekile.
SG: La Ngentsasa yangeCawa, ebhedini. Ukufunda kwisitulo somgangatho ojongene nolwandle kukwayolo olukhulu.
SG: Ndithanda kakhulu i- udidi kunye assayo.
SG: Ndiyafunda Iindaba ezilungileyo ze-eels NguPatrik Svensson (Iincwadi zeAsteroid, 2020). Ndicinga nge Ingxelo yolunye uhambo.
AL: Ucinga ukuba imeko yokupapasha isuka kwindawo yakho kwiqela elenza e-Ingenio de Comunicación?
SG: Ukuthetha ngokubanzi kunzima kwaye kuyingozi, kodwa ukunamathela kwinxalenye yecandelo endinxulumene nalo, ndicinga ukuba liyasebenza kakhulu, liyakhula kwaye likhangela iindlela ezintsha zokuqinisa ukubaluleka kweencwadi ngolu hlobo, nditsho nokuzenza izinto ezinqwenelekayo, kwaye ndizimisele kakhulu kwiivenkile zeencwadi.
SG: Ixesha esiphila kulo lihleli nzima kakhulu, kodwa andithandabuzi ukuba, ukuba into ihleli, ekuhambeni kwexesha iya kuba yeyona imbi kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » USara Gutierrez. Udliwanondlebe nombhali wehlobo lokugqibela leUSSR